Adeegyada Qaxootiga ee / Saint Andrews (StARS) - UNHCR Egypt
Adeegyada Qaxootiga ee / Saint Andrews (StARS)
Adeegyada Ilaalinta (Ximaayada)
Adeegyada Caruurta aan Wehelka Haysan iyo Kuwa Qoyska ka go’ay
StARS waxay siisaa adeegyada ilaalinta carruurta carruurta iyo dhallinyarada aan lala socon & kuwa kala maqan (UASCY), oo ay ku jiraan wax ka qabashada xaaladaha degdegga ah; adeegyada waxbarashada (oo diiradda saaraya waxbarashada tacliinta iyo dareenka bulshada); taageero nafsiyeed, la-talin, taageero shucuureed, gargaarka degdegga ah ee nafsaaniga ah; hawlaha kooxda, diiradda on waxbarashada nafsaaniga ah; iyo taageerada guriyeynta. Tani waxay dheer tahay la-talinta sharciga ee kiisaska loo qorsheeyay diiwaangelinta iyo wareysiyada RSD.
Arabic, English, Tigrinya: 01033348659
Arabic, English, Somali, Amharic: 01064400281
Oromo waxa ay ku xirantahay sida loo heli karo, Dib ayaan u celina wicitaanada haddii aan la heli karin howl wadeen Oromo ah
Latalinta dhanka sharciga ah ee codsayaasha loogu wacay si loogu qabto ballan waraysiyada xaqiijinta qaxootiga (RSD) ee fog
Arabic, English, Oromo, Amharic, Somali: 01029842820
Waxay bixisaa barnaamijyo waxbarasho oo kala duwan, oo ay ku jiraan preschool, hoose, sare, iyo dugsiga sare iyadoo la isticmaalayo manhajka Suudaan ee Ingiriisiga. STARS waxay kaloo bixisaa koorsooyin xirfadeed oo kala duwan, oo ay ku jiraan heerarka kala duwan ee Ingiriisiga, Carabiga, iyo IT-ga qaxootiga qaangaarka ah iyo muhaajiriinta nugul. Dhowr koorasyo xirfadeed ayaa sidoo kale loogu talagalay dadka waaweyn, oo ay ku jiraan tolida, farsamada gacanta, iyo xiniinyaha.
Waxbarashada Caruurta 01033315544
Bartayaal Qaangaarka ah 01120559957
38, Wadada 26 Luulyo, Esaaf Square (Metro joogsiga: Nasser)
Adeegyada Maskaxda Iyo Caafimaadka Maskaxda
Adeegyada nafsiga ah ee STARS waxa ka mid ah kuwan soo socda: Maaraynta kiis-cilmiyeedka nafsiga ee dadka waaweyn iyo qoysaska, latalinta, taageerada shucuureed; rugta la soo dego iyo gargaarka degdegga ah; adeegyada caafimaadka maskaxda iyada oo loo marayo hal-hal iyo waxqabadyo daweyn kooxeed, iyo sidoo kale adeegyada dhimirka; qiimaynta caafimaadka, talada, gudbinta iyo deeqaha; hawlaha kooxda-bulsho-bulsho; iyo guriyeynta, iyo taageerada daryeelayaasha korinta ku salaysan beesha.
Carabi, Ingiriisi, Oromo, iyo Amxaari: 010 3331 6644
Carabi, Ingiriisi, iyo Soomaali: 010 3331 6655
Carabi, Ingiriisi, iyo Tigrinya: 010 3331 6677
Dhammaan luqadaha qaxootiga: 010 5022 7388
Isniin – Khamiis